Realme GT - Nnukwu nyocha igwefoto | Gam akporosis
Realme GT - Nnukwu nyocha igwefoto
Realme emeela nke a baptizim Realme GT nke anyị gosiri gị n'oge ahụ Launching dị ka a "flagship egbu", Otú ọ dị, dethrone ndị dị oké ọnụ ọnụ nke ndị dị elu ranges, ọ dị mkpa ka nwere a igwefoto ka dakọtara. igwefoto bụ kpọmkwem otu n'ime ngalaba ebe ọnụ ọnụ ọnụ na-achọpụtakarị iche na nke "dị ọnụ ala".
Anyị nyochara igwefoto nke ihe ọhụrụ Realme GT iji chọpụta ma ọ ga-enwe ike idobe onwe ya n'etiti ọdụm dị elu nke ọ chọrọ imeri. Nọnyere anyị ma chọpụta nkọwa niile nke igwefoto nke Realme GT a.
Dị ka oge niile, anyị na-akwado ka ị buru ụzọ gafee vidiyo anyị n'elu nke anyị nyochara nke ọma ma ngwa igwefoto nke Ezigbo GT dị ka obere obere vidiyo ebe anyị ga-edebe vidiyo vidiyo. Were ohere ịdenye aha na chanel anyị ma nyere ndị Androidsis aka n’ozuzu ha na-eto eto. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịga n'ihu na-ewetara gị ọdịnaya kachasị mma, nyocha kachasị mma yana karịa ọtụtụ ndụmọdụ iji nweta ọtụtụ ihe gam akporo gị.
1 Njirimara teknụzụ nke Realme GT
2 Realme GT ngwa igwefoto
3 Nnwale igwefoto
Njirimara teknụzụ nke Realme GT
Na ụkpụrụ anyị ga-ewe obere oge iji lee anya na njirimara teknụzụ niile nke Realme GT a, ebe igwe nrụpụta dị ike pụtara. Ozo, ị nwere ike ịhụ nyocha miri emi anyị mere na nso nso a.
Realme GT ngwa igwefoto
Anyị ga-ebido ụlọ na ntọala, wee nwee ike ịse foto nke ọma ihe mbụ anyị chọrọ bụ ngwa igwefoto. Ihe ngwa ngwa Realme UI 2.0 dị mfe ma na-echetara anyị nke ndị ọzọ dị omimi dịka Apple na igwefoto iOS na Xiaomi. Agbanyeghị, nke a nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya karịa. Arụ ọrụ a dị oke ọsọ na mgbanwe n'etiti ihe mmetụta dị iche iche dị mma na ngwa ngwa, anyị ahụbeghị nsogbu ọ bụla na nke a.
Nke ahụ kwuru, ngwa ahụ awade ezigbo mkpokọta arụmọrụ, dị ka ọ na - eme na Realme UI 2.0 oge niile ka anyị ghara inwe mkpesa gbasara ya. Interface na eso ngwa ngwa ngwa ngwa na arụmọrụ kachasị mkpa na arụ ọrụ dị nso na mkpịsị aka.
Anyị na-amalite site na isi ihe mmetụta, ọzọ kpọmkwem Sony IMX682 na 64MP na oghere f / 1.9 nwere ọtụtụ ụzọ isii. Ihe mmetụta Sony a gosipụtara nke ọma ma na-enye nsonaazụ nke ị ga-atụ anya ya. N'agbanyeghị na ekwuputara 64MP nke bụ eziokwu bụ na ese foto dị na "mkpebi" dịkarịsịrị ala, agbanyeghị na anyị nwere ike ịhọrọ ihe ngosi 64MP dị na ngwa igwefoto Realme UI 2.0.
Igwefoto na-ejide nke ọma na ụdị dị iche iche, ọbụlagodi n'abalị. Ọ naghị ata ahụhụ na ọdịiche dị iche iche ma anyị na-enweta nsonaazụ akọwapụtara nke ọma nke m ga-ekwukwa oke na nsonaazụ igwefoto isi na ọnụ ọnụ dị oke ọnụ karị. Ogbugba a nwere ike ịbụ ntakịrị ọchịchịrị mana nsụgharị agba enweghị ụfọdụ okpu, agbanyeghị, nke a na-atọ ọtụtụ ndị ọrụ ụtọ ma na-eme ka ngalaba SuperAMOLED dị mma. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịse foto ahụ na usoro HDR arụ ọrụ na ọnọdụ akpaka, anyị ga-enweta nsonaazụ ka mma ma zere ire ọkụ na mbara igwe n'ọnọdụ ọ bụla.
Anyị na-aga n'ihu ugbu a na 8MP Ultra Wide Angle sensor na oghere f / 2.3 nke mpempe ise nwere ohere ịnweta ọdịnaya ruo 119º. Ihe nsonaazụ ahụ na-amalite ịdaba n'ụzọ doro anya, ọkachasị ma e jiri ya tụnyere isi ihe mmetụta. Agbanyeghị nke a, a na-edozi aberrations n'akụkụ nke Ultra lens Wide Angle, Nri uto na okwu zuru oke ga-ahapụ anyị Ultra Wide Angle a nke na-amalite ịta ahụhụ nke ukwuu na ọdịiche ọkụ yana ọkachasị obere enweghị ọkụ. N'ebe a, echetara anyị ihe ncheta mbụ na anyị anaghị eche ihu njedebe dị elu, ọkachasị mgbe nsonaazụ ọma nke isi ihe mmetụta ahụ dị.
Anyi n’ahuta onwe anyi n’iru ihe nhazi nke n’enwe mmetuta nke “mmiricolor”, anyi amatago ihe nke a putara: Anyi nwere nkocha pere mpe n’onyonyo a. Agbanyeghị, site na "ọnọdụ abalị" foto ahụ na-acha ọkụ dị ka a ga-asị na ọ bụ site anwansi mgbe ị na-agbapụ ya. Agbanyeghị, mgbe anyị jidere njide ma mbugharị na onyogho anyị na-achọpụta ngwa ngwa na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara inwe nkọwa na oke mkpọtụ dị oke elu.
Anyị na-aga n'ihu na 2MP Macro Sensor nwere oghere atọ f / 2.4 Ebumnuche iji nyere anyị aka ọdịnaya nke dị oke oke. Ihe mmetụta a na-enye nsonaazụ na-enweghị oke n'okpuru ọkụ ma ọ bụ ọnọdụ dị iche iche. N'aka nke ozo, anyi nwere Diyo dijitalụ nwere ugboro abụọ na ugboro ise. Nnukwu mmụba a na-erite uru nke isi ihe mmetụta na nsonaazụ ya dị oke mma, ebe onye na-eto eto ise na-ebelata ụdị ọdịnaya ọ bụla ma na-eme ka o sie ike iwere ya n'ihi nkwụsi ike.
Anyị na-aga ozugbo na igwefoto Selfie, oghere 16MP nke nwere oghere f / 2.5 na oghere oghere zuru oke nke nwere ike ịmịcha ọdịnaya 78º. Ọ na-enye nsonaazụ dị mma ọbụlagodi na ọdịiche dị iche iche na ọbụlagodi ga-enye anyị ohere ịhazigharị Ọnọdụ Eserese na Ọnọdụ Mma. N'agbanyeghị nke a, anyị nwere oke nsonaazụ arụpụtara, dịka ọ na-eme n'ụdị ọdụm a. Ihe anyi n’enweghi ike ibuso agha ozo.
Igwefoto nwere ike ịdekọ na mkpebi 4K ruo 60 FPS ma anyị kwadoro ka ị lelee vidiyo anyị nwere n'akụkụ nke elu iji hụ otu ha si ejide ndị mmadụ. Anyị nwere ezigbo nkwado na isi ihe na nsonaazụ ndị yiri ya na ndị foto dị na sensọ ndị ọzọ, ebe anyị na-eme na-enweghị oghere lens.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Realme GT - Nnukwu nyocha igwefoto
Poco M3 Pro, Redmi Rịba ama 10S na Redmi Rịba ama 10 Pro na ahịa a na-apụghị ịgbagha agbagha
Cubot ID206, smartwatch ọhụrụ na Alexa na nnwere onwe nke ụbọchị 18 maka ihe na-erughị euro 33